Kugara nekudyara kweSpain neGolden Visa
● Kugara nekudyara kweSpain nekudyara muzvivakwa
Best MaAgents ekugara zvakare neInvestment muSpain uye Magweta e Kugara neInvestment muSpain uye ma broker e real estate Residency zvirongwa muSpain zvinoshanda pamwe chete kuitira kuchengetedza kwevatengi.
Kugara patsva nemaInvestment vamiririri veSpain vanopa mabasa ekugara nekudyara muSpain, Kugara nehurongwa hwekudyara muSpain, Kugara nehurongwa hwekudyara muSpain, yechipiri Residency nekudyara kuSpain, mbiri Residency nekudyara muSpain, ugari uye ugari nekudyara muSpain. , Kugara zvachose nekudyara kuSpain, Kugara kwenguva pfupi nekudyara muSpain, Kugara nehurongwa hwekudyara muSpain, Kugara nehurongwa hwekudyara muSpain, Citizenship nekudyara kuSpain, Citizenship nemapurogiramu ekudyara muSpain, Citizenship nehurongwa hwekudyara muSpain, wechipiri Citizenship nekudyara kuSpain, hunyanzvi hwekuva Citizenship nekudyara kuSpain, kugara uye ugari nekudyara muSpain, ugari uye ugari nekudyara muSpain, hupfumi Citizenship zvirongwa muSpain, Citizenship nehurongwa hwekudyara muSpain, Citizenship nehurongwa hwekudyara muSpain, wechipiri pasipoti muSpain, yechipiri mapasipoti mapasipoti kuSpain, yechipiri pasipoti purogiramu ndiri muSpain, mapasipoti maviri echipiri kuSpain, pekugara uye pasipoti yechipiri kuSpain, repasipoti repasipoti repiri kuSpain, pasipoti yechipiri nekudyara kuSpain, yechipiri ugari pasipoti muSpain, yechipiri pasipoti chirongwa kuSpain, zvirongwa zvechipiri zvepasipoti kuSpain, vhiza yegoridhe kuSpain, mavhiza endarama kuSpain, zvirongwa zvendarama zvevisa kuSpain, chirongwa chendarama vhiza kuSpain, chechipiri vhiza vhiza kuSpain, chechipiri vhiza vhiza chirongwa kuSpain, vhiza mbiri yegoridhe muSpain, ugari uye visa yegoridhe kuSpain, kugara uye visa yegoridhe. muSpain, mugari vhiza mugari muSpain, dhiza vhiza chirongwa kuSpain, zvirongwa zvegoridhe vhiza muSpain.
"1 mira mhinduro" kune yako yese Residency nekudyara muSpain nerumwe rutsigiro.
Minimum Investment muSpain ye Residency nekudyara: EUR 500,000
Nhanganyaya Spain uye Residency neInvestment
Spain inogara ichiratidzwa seNhamba yeNyika imwe nzira yehupenyu chinangwa, uye hazvina kuoma kuwana kuti nei. Iko hakuna nyika zhinji dzinogona kupa zvakatosiyana chiitiko, chinopa simba mainjiniya, uye yakadzama yakasungirirwa nhaka yakanyorwa zvakare nharaunda yayo inoshamisa uye inofadza makungwa.
Spain yaive zvakare yekupedzisira inonzi nyika inobatsira kwazvo pasi, sekuferefetwa kwenyika zana nemakumi mapfumbamwe nepfumbamwe neBloomberg. Tsvagurudzo iyi yakafunga nezvezvishoma zvinhu zvinowedzera kuhupenyu hwese, semuenzaniso, kuvharisa, kusiana kwezvinhu zvipenyu, uye manejimendi manejimendi.
Spain nekuwedzera ine ramangwana rakakwirira kwazvo pakupinda pasi rose pakati penyika dzeEuropean Union, kumashure kweJapan neSwitzerland pasi rese, sekuratidzwa neUnited Nations. Pakazosvika 2040, Spain ndeye fungidziro yekuve nehurefu hwenyika hunotarisirwa kurarama, pamakore anoda kusvika makumi masere nemasere, ichiteverwa neJapan, Singapore, neSwitzerland.
Heano zvikonzero zvikuru gumi zvaLucas Fox Style nei tichivimba nemamiriro eSpain senzira yenyika yehupenyu hotspot yakachengeteka kune yakakosha nguva-furemu:
1. Mamiriro ekunze
Iyo yakasarudzika yegungwa nzira yehupenyu inojekesa zvakazara chivimbo chekuti iyo Iberia landmass ine nzvimbo yeMediterranean, zvisinei zvirokwazvo ichi chingori chidimbu cheyese inodziya, inokoka nyaya. Spain yakakura kwazvo, uye iine nzvimbo yayo huru inonamira, nzvimbo dzinotyisa, uye kureba kwakanyanya kwemahombekombe egungwa kunogogodzawo kuAtlantic, irwo rudzi rwekusiyana kwemamiriro ekunze - ayo ese akagadzwa kuti awane mari kubva muhupenyu. Chokwadi, inonaya pabani, asi kunyangwe mamiriro ekunze anogona kukudzikisa dzimwe nguva mhepo haidi. Kunyangwe iwe uchizorora pajecha jena reIbiza, uchifamba nemitambo yekuchamhembe yePyrenees, kana kupikicha mumiti yakasvibira isina hanya nemanzwiro egungwa reGalician kuchamhembe, mamiriro achave shamwari yako.
2. Mhenderekedzo yegungwa
Spain ine zviuru zvisere zvemakiromita enharaunda uye mahombekombe egungwa, kusanganisira chikamu chegungwa chakanakisa pasi rese. Funga zvakanyatsojeka mvura yebhuruu, jecha jena, zvinofadza zvisina kunaka bluffs, yakafukidzwa mabheji, uye kumuka kunofadza. Sarudza kufamba-famba, kusimudzira, kana kutandara muzuva, kuruka pamusoro, kufambisa, kana kugadzirira nhangemutange.
Kusvika kure Kusimbisa Mureza weBlue kunoratidzira mamiriro eSpain pamberi peiyo mhando yemahombekombe uye hutano, iine 569 mhenderekedzo yegungwa (20% yehuwandu) yakabvumidzwa zviri pamutemo kuratidza iyi inokudzwa pennant yehukuru. 16% yemahombekombe egungwa eBlue Flag ari muSpain. Basa rakasimba kumahombekombe kurongedza marara marara nemarara, uye kubatsira kuona nezve idzi nzvimbo dzekugara dzehupenyu hwevanhu vanogara zvakare.
VekuSpain vanodya vakaratidzira mumatatu makuru eiyo 'Yakanakisa maresitorendi epasi rese' kubvira payakatanga mu2012. Rundown raita mazita anozivikanwa pasi rose aFerran Adriá naEl Bullí (akahwina kakawanda) uye Iyo Roca Brothers naEl Celler Can Roca (akahwina kaviri).
4. Kugadzira uye Kugadzira
Spain iri kure nekurwisa nzombe uye flamenco, kunyangwe hazvo magungano aya akarukwa muchiitiko cherudzi. Izvozvowo zvakapa nyika inozivikanwa nyanzvi, vanoita uye vanyori, uye vanoramba vachiita saizvozvo. Goya, Velásquez, Picasso, Miró, Dalí, Cervantes naGaudí… rombo rakanaka rema greats rinogona kukosheswa munzvimbo dzezvakaitika kare, mumigwagwa, uye munzvimbo dzemitambo dzakawanda uye kuratidzwa zviitiko uko tsika dzeSpanish dzinorumbidzwa.
Spain inoda kufara kubva nguva yakati yapfuura asi mukuwedzera inobata kufambira mberi kusingagumi uye irikushandisa kufungidzira kwayo kwakapfuura kuvaka chikamu chikuru padanho repasi rose mune izvo zvichauya. Chero nzvimbo yaunoenda kuSpain izvi zviri kuitika, kubva kuCastellers kuvaka giravhiti-inonetsa mapenji munzvimbo kuti ensembles irikuita kunze mumapaki kana emabhazi kuyedza kutora pfungwa dzako pamharadzano dzedhorobha. Kutenderedza uye nyika, hunyanzvi, uye tsika dzinotarisira, uye chikamu chinosimudzira nenzira yehupenyu.
5. Chimiro uye Kutaurirana
World Economic Forum yakaisa Spain panhamba 12 papasi uye 'muenzaniso wakanaka' hwenheyo uye zvine hungwaru manejimendi. Iyo ine imwe yemigwagwa mikuru yemigwagwa ine 17,000km yemigwagwa yeparkways, nzira yehurefu yekukurumidza njanji muEurope iyo parizvino inopindirana neBarcelona neParis, uye nemweya wakanaka kwazvo negungwa zvinopinda.
Saka kutenderera kuri nyore, uye Spain inopa vanhu zvikonzero zvakawanda zvekufamba uye kuongorora. Iri kuwedzera kugadzira hwaro reramangwana rine simba. Kubudirira mumabasa epamberi hakuna kujairika, nepo kubatanidza kwakazara kubatanidza mhuri uye kunyangwe chiremera cheveruzhinji nehutongi hwehutongi vari kubata e-nhanho.
Kurairidzwa kunoshamisa - kune zvikoro mazana maviri nemakumi maviri nepfumbamwe zvakanyoreswa pasi rese - kurapwa kunoremekedzwa muEurope yose uye zvakapfuura, mapaki anotariswa, migwagwa inocheneswa uye marara nekushandiswazve anotarisirwa zvisina mutsigo uye nenzira kwayo.
6. Tsika nemitambo
Mhemberero ibasa rehunyanzvi muSpain. Ndezve zvese zvinangwa uye zvisingafungidzike kwemazuva manomwe kuti apfuure pasina mutambo uyo munhu wese anogona kukoshesa. Senyika yeKaturike, Spain ine mhemberero dzakawanda dzakaomarara uye kufora. Goriyati, inosangana, matafura akareba mumigwagwa yakavharwa uye kudzokororwa kwemadhiramu kwakakosha kuhupenyu muguta rega rega, mutaundi, uye taundi.
Pamplona's San Fermin mhemberero, inozivikanwa 'kumhanya kwenzombe', uye yakasarudzika 40,000 varume varume chigadzirwa chakavakirwa fling fest yeLa Tomatina muValencia vanogona kuwana epasirese maficha asi akapfuma magungano uye kurumbidzwa kwezuva risiri pabasa, kutamba kana firecracker - rarama pane zvakawanda zvisina kujeka uye zvechokwadi mu 'chaiyo' Spain.
Pamusoro pezvo, nepo nyika zhinji dzichivimbisa kuve nenzvimbo dzebistro, zvakadaro mhando dzakaderera-dzechikafu hadzigone kubata cappucino kuSpanish kuratidzira kusingaperi kwemunhu, hunhu, hunokoka, uye kazhinji hwaro hwakaipa.
Mavara aya haana hunyanzvi hwekubata nemabaristas uye bhinzi yakanyanyisa. Iwo maratidziro emambure, chidimbu chakakosha chehupenyu hwekuti maneja wezvemari anogona kutora cortado inokurumidza padhuze nevashandi vachidya masangweji kubva kufirita yesirivheri uye vachikoshesa chikafu chakakodzera chemangwanani. Zvakare, uko gin uye toniki kana girazi rewaini rinotorwa papatio kana pazvigaro zvisina kugadzikana zvakavakirwa pamatombo.
Iyo yekunze nzira yehupenyu yakasimudzira akawanda maSpanish anopa donny makwikwi. Vanhu, semuenzaniso, Seve Ballesteros, Rafa Nadal, Garbiñe Muguruza, Miguel Indurain, naFernando Alonso vanogara padyo nemakirabhu, semuenzaniso, Barcelona neReal Madrid vanotonga pasi rose.
Kubva zvakazivikanwa maOlympics a1992, huwandu hwevakadzi vanokwikwidza vanoita rwiyo mumutambo hwakwira kubva pamazana mazana matatu kusvika mazana manomwe ezviuru. Nekudaro, chero munhu anogona kushandisa iyo yeSpanish yekumaka nzira yehupenyu.
Kubva pakufamba kwemakomo uye kuenda kunoshambira uye kushambira, kubva kunhabvu uye bhora kuenda kutenisi uye handball, uye kubva kumushure-kwebasa kumhanya kana kutenderera kwakadzika kwePadel kukirabhu kuenda kumhenderekedzo yegungwa regungwa uchitsvaga kahawa, iko kuita chaiko kwakasarudzika zvakaoma kunzvenga.
Nhoroondo yakashata yeIberia yekushambadza yakasiya mavanga ayo asi zvakare yakapa maparera enharaunda ayo anoshandura nyika iyi kuita yemahara, yekunze horo yekuratidzira yakagadzirirwa kubhadhara izvo zvinokatyamadza nekuvaka zviitiko zvine hukasha hweRoma, chiArabic, chiGothic uye chazvino uno.
Simba nezveinjiniya ndiyo hwaro hwehupenyu hweSpanish, husina kukonzeresa kusagadzikana nenzvimbo dzakawanda dzeUNESCO World Heritage nzvimbo - Sagrada Familia yeBarcelona, ​​Alhambra yeGranada, Guta rekare reSalamanca, uye La Mesquita muCórdoba - mubatanidzwa weflorid, gothic, kumutsidzirwa uye Moorish Mudéjar, sechechi uye mosque mune imwe.
Kunzwa kwakanaka kwetiweki kunotambudza nzanga yeSpain. Vanhu vacho vanoronga kutaura pamusoro, kupokana, uye kupemberera. Zera rinotarisirwa uye rinofarirwa uye mhuri ndizvo zvese - zvisinei nekuti ndiwe uri kuwedzera kuchangoburwa kana kuti wakanyanya kusimbiswa unenge uri chidimbu chezvinhu, zvisati zvamboitika pane anodya neSvondo masikati.
Kubatsira, kuyedza, parochial, cosmopolitan, tsika, uye kupaza pasi zvakaenzana, huwandu hweSpain musanganiswa unokatyamadza wevatambi uye magariro enharaunda anoenderana neyakareba, nhoroondo yechisimba yakaenderera kusvika zvine mutsindo sekupedzisira.
Zvisinei, izvi zvinongoratidzika sekusimbisa vimbiso yekupinda muZana ramakumi maviri nemasere sapiyona muzvikamu zvisinga gume zvezvinhu zvehupenyu zvinobatsira. Vanhu veSpanish vanofara uye vane hunhu hwakasimba, asi nerombo rakanaka, vanogona kukoka futi, izvo zvinoreva kuti vakadzingwa vanogona kutora chikamu uye voita zvakanakisa yavo yega nzira yakanaka yehupenyu.
10. Spain Iga
Isu tese tine pfungwa dzakasiyana maererano nezvavanogadzira nzira yakanaka yehupenyu, asi kukwezva kweSpain kuri mune zvakawandisa zvezvikwereti zvakagadzirwa kubva pasi kupfuura huwandu hwakawanda hwemakore.
Chero zvauri kutsvaga, Spain ine nyika dzakashama, zviwi, uye mahombekombe zvinopa mamiriro akakodzera ekushandurwa kwako kwehupenyu hwako hwakanakisisa. Iine nharaunda dzemaguta dzine hupenyu, maguta ehove ane hunyoro, madhorobha emusika, uye idylls yakavhurika iyo inopa kuwirirana uye kudzikama mamaira kubva chero nzvimbo.
Madziva, makomo, uye mipata zvinoramba zviri mukubwinya kwakasiyana mutsauko kune inopenya superyacht marinas uye kusimudzira kutsva
Zvekutanga zvinyorwa zveResidency neInvestment yeSpain
Chishoma kudyara kwe Kugara nekudyara muSpain
Kugara nekudyara kweSpain
Residence mvumo yakapihwa kwe2 makore
Kuchengetedza nguva yeResidency nekudyara kweSpain
2 kune vhiki dze4
Mushure memakore gumi ekugara zviri pamutemo.
Ugari Hwenyika Hwakabvumidzwa vagari veSpain
Investment Sarudzo dze Kugara nekudyara kweSpain
- Zvivakwa zvedzimba (€ 500,000)
- Zvikamu kana mabhengi anoisa (€ 1 miriyoni)
- Chikwereti cheveruzhinji (€ 2 mamirioni)
Nei uchienda kune Residency nekudyara kweSpain
Spain ndiyo imwe yenzvimbo dzinozivikanwa kwazvo zororo muSouthwestern Europe. Iyo ine hunhu hunoshamisa, hwakasiyana tsika uye nhoroondo. Spain inhengo izere yeEuropean Union uye nzvimbo yeSchengen. Izvi zvinoreva kuti vagari veSpain vanonakidzwa nekufamba kusingagumi vhiza-yemahara mukati meEurope yese. Iyo inozivikanwa chirongwa chekudyara kwekugara kweSpain inokurumidza uye yakapusa. Inokupa iwe nemhuri yako zvese zvakanaka pasina panyama kuti ugare munyika.
Mhuri inopinda muSpain
Mudzimai nevana vasati vasvika makore gumi nemasere vanogona kuwana mvumo yekugara zvinoenderana nehurongwa hwekubatanidzazve mhuri, mushure mekunge muzvinashawo mukuru agamuchirwa. Vabereki nevana vanopfuura makore gumi nemasere vanogona zvakare kuve vanokodzera, kana vari mari vanovimba nemukuru investor.
Kugara nehurongwa hwekudyara muSpain kukurudzira
Maitiro acho anokurumidza kwazvo. Zvinongotora mazuva gumi nemashanu kubva pakuratidzira kunyorera. Zvakadaro, pamberi pekutumirwa kwechikumbiro munyoreri anofanira kunge akazvipira kuwana chivakwa. Zvinoreva kuti iye anenge achinyorera anofanira kushanya kuSpain chikumbiro chisati chanyorerwa, asaina kondirakiti yekutenga pane iyo pfuma yanga yasarudzwa, uye ovhura account yekubhangi.
Paanodzoka kumba, iye anonyorera anoendesa dhipoziti kuti atange maitiro ekutengesa. Maitiro aya anogona kutora kubva pamwedzi miviri kusvika mitatu, mushure meizvozvo munyoreri anogona kuendesa chikumbiro uye kugamuchira mvumo yekugara.
Spanish Mutemo 14/2013, inobvumira vasiri-EU varairidzi kuti vakwanise kugara kuSpanish pasi pechirongwa chendarama vhiza. Idzi dzinoteedzera mari dzinokodzera Spanish spanish visa.
Mari inodiwa kuSpain
Kuti uwane mukana wekugara kwekudyara unodiwa mutengo wepasi wekutenga zvivakwa zveEUR 500,000. Isarudzo yemusimari kana kugara mune yakatengwa imba kana kuiroja. Pamusoro pezvo, mubhadharo wepamutemo uye wehurumende nemitero inofanirwa kubhadharwa, inokwana kutenderera EUR 60,000 yemhuri ye4.
Kutsigira kwevatengi kweResidency nekudyara kweSpain
Chikwata chedu che Residency neInvestment Agents kuSpain uye Residency ne Investment Lawyers kuSpain inopa vatengi uye mhuri dzavo kuSpain nerutsigiro rwekuva mugari nekudyara kubva kuSpain, kugara nekudyara kubva kuSpain nedzimwe mikana yekudyara yekubva kune dzimwe nyika, munyika makumi matatu nenomwe.
Masevhisi edu haana kungogumira mukugara nekudyara kubva kuSpain kana Golden Visa kubva kuSpain kana ugari nekudyara kubva kuSpain kana yechipiri pasipoti, isu tinobatsirawo mune yakanakisa dzimba dzekudyara mikana kubva kuSpain, ichipa mhinduro izere kana iwe uchida kumisikidza kambani mu Spain kana kumahombekombe, zviwanikwa zvevanhu muSpain uye zvimwe zvakawanda, izvo zvinosanganisira kuronga zvemari nezvimwe zvakawanda.
Kubatsira vatengi vedu nehugari-hwakavakirwa mhinduro mukati uye kubva kuSpain nekugara kwechipiri.
Kutsigirwa Kwakakosha kwevagari veSpain:
Isu tinopa zvinodhura Kugara nemabasa ekudyara zveSpain, kuburikidza neyedu inokwanisika mari yekudyara uye yekufambisa mutemo yekuSpain, inokwanisika inivhesitimendi inosvika kune vanoenda kune dzimwe nyika vanokumbira kuSpain, inokwanisika Residency nevarairidzi vezvekudyara kuSpain, inokwanisika Residency nemagweta ekudyara kuSpain uye inokwanisika yekuenda kune dzimwe nyika femu yekuSpain.
Kugara nekudyara kubva kuSpain kuenda ku37 Nyika.
Ndarama vhiza kuSpain kune 37 Nyika.
Ugari nekudyara kubva kuSpain kuenda ku37 Nyika.
Yechipiri pasipoti kubva kuSpain kuenda ku37 Nyika.
Bhizinesi Kubva kune dzimwe nyika kubva kuSpain kuenda ku106 Nyika.
Kugara patsva nemapurogiramu ekudyara kubva kuSpain.
Goridhe visa zvirongwa muSpain kune 37 Nyika.
Ugari nemapurogiramu ekudyara kubva kuSpain kuenda ku37 Nyika.
Chechipiri pasipoti zvirongwa kubva kuSpain kuenda ku37 Nyika.
Mapurogiramu ebhizinesi ekupinda munyika kubva kuSpain kuenda ku106 Nyika.
Kugara nekudyara kweSpain kuburikidza neReal Estate
Isu tinopa rutsigiro rwezvivakwa zvezvivakwa muSpain nemaonero ekuti mutengi anofanirwa kuwana kudzoka kwakanaka mukudyara kuSpain, chero nguva, pavanoda kusarudza kubva mukudyara kwakaitwa navo kweKugara kwavo nekudyara kweSpain. Isu tinosungirirwa nevashoma vashoma vezvivakwa zvevatengesi muSpain vane yakanaka track rekodhi uye yavo pfuma iri munzvimbo dzakanaka muSpain, kutora zvakanaka kudzoka.
Yakanakisa edzimba dzimba zvirongwa zveSpain nemari yekudyara muzvivakwa muSpain.
Unoda kuziva - Spain Residency neInvestment
Kugara neInvestment Gweta kuSpain kunopa zvakadzama zvinyorwa zvinyorwa kune yako yakabudirira Kugara nekudyara kuSpain. Yedu yakajairwa masevhisi ekugara zvakare neInvestment kuSpain inosanganisira:
Magweta edu anonzwisisa zvaunoda kuti utamire kubva kuSpain kana kuenda kuSpain, zvichibva nekuti ndeapi mazano angaitwa
Isu tinotungamira Kwekutanga Kukoshesa Kushingairira, kugadzirira mushumo usati wakurudzira Residency nekudyara kweSpain kune vatengi kuti vawane Residence Chibvumirano cheSpain uye kudzora njodzi yekuramba.
Kubva pane mushumo wekushingairira kuSpain, isu tinokurudzirawo mamwe mapurogiramu ekubudirira zvirinani.
Kuti isu tifambire mberi neako Residency nekudyara kunyorera kuSpain isu tingangoda makopi akaongororwa evatengi uye nhengo dzemhuri pasipoti.
Dudziro uye apostile ezvinyorwa Kugara nekudyara kunyorera kuSpain. Magweta edu akasarudzika e Residency nekudyara kweSpain uye vhiza yegoridhe inobatsira nekuzadza mafomu uye zvinyorwa.
Kana yako uye yako yemhuri zvinyorwa zve Residence nekudyara kunyorera kuSpain kwagadzirira, tichazvizadza nezviremera zvakakodzera zveSpain.
Duration: 2 kune vhiki dze4
Kamwe chikumbiro chako cheKugara nekudyara kweSpain chikatenderwa, tinogovana nhau dzakanaka newe uye totanga kugadzirira zvimwe zvinotsigirwa.
Isu hatitsigire kana kupa Residency nemabasa ekudyara muSpain kune vanotaurwa pazasi Vanhu kana mabhizinesi muSpain:
Residency nebasa rekudyara kuSpain hadzisi kupihwa kune Vatengesi kana vanogovera maoko nezvombo kubva kana kuSpain.
Residency nezvirongwa zvekudyara zveSpain hazvipi kupihwa kwehunyanzvi kuongororwa muSpain kana maindasitiri espionage ezvirongwa zvekudyara mukati kana kubva kana kuenda kuSpain.
Residency nekutsvaga kwekutsvaga kwekuSpain hazvipi kupihwa chero zvisiri pamutemo kana tsotsi zviitiko kuSpain.
Residency nerutsigiro rwekudyara kuSpain haisi yevanhu vanobata maGenetic zvinhu kuSpain.
Residency nebasa rekudyara kuSpain haisi yemabhizimusi anotengesa zvombo zvine njodzi kana zvine ngozi zvebhagiriya kana zvombo zvenyukireya kuSpain.
Residency nechirongwa chekudyara rutsigiro rweSpain haruwanikwe kune vanhu veSpain vanoita mukutengesa, kuchengetedza muSpain, kana kutakurwa kwenhengo dzeVanhu.
Residency nekudyara kuSpain haisi yematare asiri pamutemo ekurera vana.
Residency zvirongwa zvebasa kuSpain haisi yezvitendero uye masangano avo kuSpain.
Residency nebasa rekudyara mu Speini haina kupihwa kune vanhu vari kuita Zvinonyadzisira muSpain.
Kugara Kwedu magweta kuSpain haitsigire bhizinesi rekutengesera mune zvekushandisa zvinodhaka muSpain.
“Chiziviso Chakakosha : MM Solutions INC inotora chengetedzo inonzwisisika kunyatso gadza AML zvinyorwa zvevatengi veSpain neKYC yavo asi isu hatigamuchire chero mutoro (s) wekurambwa chero kupi zvako kubva kuzviremera muSpain kubvumidzwa kunyorera Residency nekudyara muSpain.
Kugara nekudyara muSpain nedzimwe nyika, pamwe nezvimwe zvakawanda zvinotsigirwa.
Isu tinopa yakanakisa Kugara nekutsigira kwekudyara muSpain kwekudyara, kutamira kune dzimwe nyika uye kuronga kwezvivakwa muSpain.
Inotsigirwa neInternational Residency neruzivo rwekudyara uye zvinodiwa neSpain zviri pamutemo, tinogadzira mhinduro dzakanakisa.
Yedu Residency nemabasa ekudyara kuSpain inopa mitengo yakachipa kwazvo, ine chinzvimbo chinobudirira cheSpain.
Isu takatora makore eruzivo rwekugara kwevaviri kuSpain vachitsigira vatengi pamwe nemhuri dzavo kuSpain.
Vanowana ruzivo rwekugara nekudyara kwekukumbira kuSpain nevamiriri vepamutemo veSpain vanopa rutsigiro kune vatengi.
Tine akanakisa magweta nevamiriri veSpain vanobata maitiro uye kunyorera avo vakazvipira kubudirira kwako.
Pamberi pekugara kwako kuSpain uye mushure mekubvumidzwa, nhengo yedu yechikwata chepamusoro yaizovapo yebhizinesi kana rutsigiro rwemunhu kuSpain
Isu tine ruzivo rwepasi rese muResidency nekudyara kusanganisira Spain, kubatsira vatengi kubva kumativi ese epasi nemasevhisi akanakisa.
Muchiitiko icho, Kugara kwako nekudyara kuSpain kunokundikana, kune dzimwe nyika makumi matatu neshanu dzatinoshandira, isu takagadzirira nehurongwa B.
Verengai mutengo weKugara neInvestment kuSpain
Kuti uverenge mutengo weKugara nekudyara kweSpain ndapota zadza zvese zvese kusanganisira nhengo dzemhuri uye zera ravo. Nekuda kwenhamba huru yevatengi veSpain, isu tinokwanisa kupa masevhisi ari nani nemutengo wakaderera. Kuverenga kuchaita, kunosanganisira, mutengo weKugara nehurongwa hwekudyara kweSpain uye zvimwe zvikwereti.
mhando vhiza kuSpain
Maitiro Ekubvumidza Kubatira kuSpain
Kwekugara kwenguva pfupi muSpain
Permanent Residence muSpain
Embassies uye ma Consulates eSpain
Kugara neInvestment muSpain uye Mamwe masevhisi
Isu takanyora pasi mamwe mashoma masevhisi atinopa kuSpain kune izvozvi kana zvichauya zvinodiwa.
Kana iwe uri kuronga kutamira pamwe nemhuri yako kuSpain nekudyara mari, isu semumwe wako kuSpain, tiripo kuti tipe yakawanda mamwe masevhisi uye uye kana paungangoda kuSpain nemitengo inodhura.
Kunze kweResidency nekutsvaga kwekudyara kuSpain, isu tinopa bhizinesi, IT uye HR masevhisi zvakare kuSpain, iyo iwe yausingakwanise kuwana pasi peimwe amburera yakapihwa nechero vamwe vanopa mazano kuSpain ichitigadzira shopu imwechete yekuSpain nenyika dze106.
"Isu takaisa makore ekuyedza uye pasi rose mu106 Nyika kubatsira mhuri, vanhu, uye bhizinesi kuSpain mukuzadzisa zvinangwa nezvishuwo zvavo."
Isu tinotsigira yedu mutengi nzira yekupfuura Residency nekudyara kweSpain nerubatsiro rwemagweta edu, vanachipangamazano uye kusunga-muSpain nepasi rese.
Tinogona kukubatsira kunyoresa kambani kuSpain kana Offshore uye 106 Nyika (Mari yekunyoresa kambani kuSpain yakachipa nesu.)
Chero ani investor anotamira kuSpain angangoda akaundi yebhangi kuSpain uye account yebhangi yekambani muSpain, isu tinogona zvakare kubatsira nemaoffshore bank account.
Peji yekubhadhara muSpain
Kana iwe uchida kubvunza muSpain, ye mhinduro dzemadhijitari muSpain senge yechinyakare kana fintech yekubhadhara gedhi muSpain kana crypto mhinduro, tizivise.
Mushure meResidency nekudyara ku Spain kana uchironga tanga bhizinesi nekutenga riripo bhizinesi muSpain kutanga pakarepo muSpain.
HR Services muSpain
Our kambani yevashandi muSpain inogona kukubatsira nekukurumidza kutora vanhu. Iwe unogona zvakare post nzvimbo muSpain vakasununguka.
Nhamba Dzenhare dzeSpain dzeSpain
Bhizinesi foni nhare dzeSpain pamwe ne nhamba dzeSpain Nyika 102 uye Maguta 291.
Zvemari Kuronga Services muSpain
Accounting, kushingairira kwakakodzera kuSpain uye zvakawanda.
Virtual Hofisi Kero muSpain
Setup bhizinesi kuSpain
Mushure meResidency nekudyara kuSpain, setup bhizinesi mu Speini.
Isu tinopa pazasi zvataurwa IT mhinduro muSpain
Kugadzira Webhu muSpain
Ecommerce Kuvandudza muSpain
Webhu kuvandudza kuSpain
Kuvandudza kweBlockchain kuSpain
App Kubudirira muSpain
Software Kubudirira muSpain
Magweta e Residency neInvestment muSpain
Isu tinopa Residency zviri pamutemo neInvestment mhinduro kuSpain uye kubudirira kwevatengi vedu kwakakosha, kuSpain, isu tiri vatungamiriri, kambani yedu yemutemo kuSpain ine vamiririri vakanakisa vekupinda munyika yeSpain, isu tine mukurumbira wekuburitsa yakanakisa vatengi sechiitiko kuSpain ne kujekesa nzira dzekudyara dzekuSpain vanhu pamwe nemhuri dzavo. Yedu Residency neboka rekudyara kuSpain inopa mhinduro dzakagadzirwa dzekubudirira kweMutengi.
Nhengo dzemhuri yako (vana, mukadzi, vabereki) vanokodzera kupihwa mvumo yekugara kuSpain, pamvumo yako yekugara muSpain inogamuchirwa.
Simba regweta reSpain rinodikanwa kune ese matanho epamutemo pachinzvimbo chako neResidency nevemagweta ekudyara muSpain. Kana iwe uri kuSpain kana kuronga kushanyira Spain, tinogona kuwana simba rako regweta pano.
Isu hatibhadhare yakawedzera yekuwana Simba regweta. Kana iwe uchironga kutanga kunyoreswa kwekambani kuSpain iri kure, simba rako regweta rinofanirwa kuve rakanyoreswa zviri pamutemo kuti rishandiswe mundima yeSpain. Zvichienderana nenyika yaunogara, inofanirwa kuve yakatendeka kana kubvumidzwa nemumiriri weSpain.
Inowanzo Bvunzwa Mibvunzo - Kugara neInvestment muSpain
Ndeipi tsananguro yekugara nekudyara muSpain?
Kugara nekudyara kuSpain, kunogona kutsanangurwa sekuwana kugara kweSpain kuburikidza nekudyara muhupfumi hweSpain kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, bhizinesi, zvivakwa, zvisungo zvehurumende, nezvimwe. Nyorera kugara kwekugara nekudyara kuSpain, kugaramo nehurongwa hwekudyara kweSpain. inotsigirwa nekugara nemabasa ekudyara kuSpain, kuburikidza nekugara kwedu kwakanakisa nemagweta ekudyara muSpain, kugarisana kwakanakisa nemagweta ekudyara kuSpain uye kugarisana kwakanakisa nevanoona nezvekudyara kuSpain, vachishanda zvakanyanya kugarwa nevamiririri vezvekudyara muSpain, uye akanakisa mafemu ekuona nezvekupinda munyika. muSpain.
Kugara patsva nemabasa ekudyara kuSpain | Kugara nevamiriri vemari muSpain | Kugara nemagweta eInvestment muSpain | Kugara nemagweta ekudyara muSpain | Kugara nevanoona nezvekudyara kuSpain
Ndeipi tsanangudzo yekuva mugari nekudyara muSpain?
Ugari nekudyara kuSpain, hunogona kutsanangurwa sekuwana ugari hweSpain kuburikidza nekudyara muhupfumi hweSpain kuburikidza nenzira dzakasiyana senge bhizinesi, zvivakwa, zvisungo zvehurumende, nezvimwe kuSpain. Nyorera kuva mugari wemo nekudyara kuSpain, ugari nehurongwa hwekudyara kweSpain inotsigirwa nehugari nehumambo hwekudyara kuSpain, kuburikidza nehukama hwedu hwakanakisa nemagweta ekudyara kuSpain, ugari hwakanakisa nemagweta ekudyara kuSpain uye hukama hwakanakisa nevanopa mazano veSpain, vachishanda kuva chizvarwa chakanakisa nevamiririri vezvekudyara muSpain, uye akanakisa mafemu ekutsvaga vanoenda kune dzimwe nyika kuSpain.
Affordable Investor immigration services kuSpain | Vanodhura vanopinda munyika muSpain | Vanodhura varidzi vemari vanoenda kune dzimwe nyika muSpain | Vanodhura varidzi vekupinda munyika magweta muSpain | Vanodhura varidzi vemari vanoona nezvekupinda kuSpain | Affordable immigration law firms kuSpain
Ndeipi tsananguro yepasipoti yechipiri kuSpain?
Yechipiri pasipoti muSpain, inogona kutsanangurwa sekuti, kuva mugari weSpain zviri pamutemo kuburikidza nekudyara muhupfumi hweSpain kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, zvivakwa, bhizinesi, zvisungo zvehurumende, nezvimwe. wechipiri pasipoti masevhisi eSpain, kuburikidza nemagweta edu epiri epasipoti muSpain, magweta echipiri epasipoti kuSpain uye akanakisa echipiri mapasipoti mazano kuSpain, anoshanda kumahofisi echipiri epasipoti muSpain, uye akanakisa mafemu ekutsvaga vanoenda kune dzimwe nyika kuSpain.
Chechipiri pasipoti services kuSpain | Chechipiri pasipoti vamiririri muSpain | Yechipiri mapasipoti magweta muSpain | Yechipiri mapasipoti magweta muSpain | Chechipiri pasipoti vanopa mazano kuSpain
Ndeipi tsananguro yegoridhe visa muSpain?
Ndarama vhiza muSpain, inogona kutsanangurwa sekuti, kuwana mvumo yekugara kuSpain kuburikidza nekudyara muhupfumi hweSpain kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, zvisungo zvehurumende, bhizinesi, zvivakwa, nezvimwe. Nyorera vhiza yegoridhe kuSpain, chirongwa chendarama vhiza yeSpain inotsigirwa goridhe vhiza masevhisi kuSpain, kuburikidza neyedu akanakisa egoridhe vhiza magweta kuSpain, akanakisa egoridhe vhiza magweta kuSpain uye akanakisa egoridhe vhiza varairidzi veSpain, vanoshanda pane akanakisa egoridhe vhiza vamiririri muSpain, uye akanakisa ekupinda kwevanoona mafemu kuSpain.
Goridhe vhiza services kuSpain | Ndarama vhiza vamiririri muSpain | Magweta egoridhe vhiza muSpain | Magoridhe vhiza magweta muSpain | Goridhe vhiza vanopa mazano kuSpain
Ndechipi chiri chidiki chekudyara kweResidency nekudyara kuSpain?
Kashoma kudyara kweResidency nekudyara muSpain iri EUR 500,000.
Iwe unopa rubatsiro rwepamutemo kuSpain kweResidency nekudyara here?
Ehe, gweta redu kuSpain nevamiriri muSpain vanopa rutsigiro rwekugara zvakare nekudyara kuSpain.
Kugara nekudyara kuSpain kunodhura here?
Mutengo weKugara neInvestment kuSpain uye Kugara nekudyara mari inodiwa kuSpain ndeye yakakwira mambure akakosha vanhu, isu tinobhadharisa chete mari yekubvunzana yeResidency neInvestment kuSpain, isu tinopawo yakawanda zvimwe zvinotsigira zveResidency neInvestment mhinduro.
Ndeapi vagari venyika vanogona kunyorera Residency nekudyara kuSpain kana investor visa kuSpain?
Kugara nemabasa ekudyara mari anogona kushandiswa nevagari venyika chero ipi asi mienzaniso mishoma ndeyeKugara nekudyara kuSpain kubva kuAsia, Kugara nekudyara kuSpain kubva kuAfrica, Kugara nekudyara kuSpain kubva kuEurope, Kugara nekudyara kuSpain kubva kuSouth America, Kugara nekudyara kuSpain kubva kuMalaysia, Kugara nekudyara kuSpain kubva kuBangladesh, Kugara nekudyara kuSpain kubva kuIndonesia, Kugara nekudyara kuSpain kubva kuSri Lanka, Kugara nekudyara kuSpain kubva kuNepal, Residency nekudyara kuSpain kubva kuIndia neResidency. nekudyara kuSpain kubva kuUAE.
Professional Residency neInvestment Guidance kuSpain
Kumbira kubvunza Mahara kune yako Residency neInvestment kuSpain
Mazwi akakosha muRudzi rwekugara neInvestment yekuSpain
Ministerio de Educación, Cultura, y Deporte (ChiSpanish)
Ministerio de Industria, Energía, y Turismo (Chirungu)
Ministerio de Empleo y Seguridad Nharaunda (Spanish)
Ministerio de Economía y Hacienda (Spanish, Chirungu)
Ministerio de Hacienda (ChiSpanish)
Ministry of Justice (ChiSpanish)
Ushumiri hweHurumende (Spanish, French, Chirungu)
Ministry of Development (Spanish, nerondedzero ye digital tachograph muChirungu).
Ministerio de Sanidad y Consumo (chiSpanish)
Ushumiri hweInternational (ChiSpanish)
Link to Dhipatimendi Rekupinda muSpain , ane basa rekuumba marongero ekuchimbidza kuenda kune dzimwe nyika kuSpain